Ibhetri ekhangeleka ngathi ngumlingisi uLance Bass kwiGreater Mekong Region | Iindaba eziziiNdaba zokuHamba
Ikhaya » izithuba » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ibhetri ebonakala ngathi ngumlingisi uLance Bass kwiNgingqi eNkulu yeMekong
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba eLaos • Iindaba zokuhamba eMyanmar • Iindaba zokuhamba eThailand • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Ibhetri ebonakala ngathi ngumlingisi uLance Bass kwiNgingqi eNkulu yeMekong
Ibhetri ebonakala ngathi yimvumi / umdlali weqonga uLance Bass, igibhoni egama linguLuka Skywalker, kunye neqhenqa elibonakala ngathi livela kwiNkosi yeeRingi "uMhlaba oPhakathi," ziphakathi kweentlobo ezintsha ezili-157 ezafunyanwa kwiNgingqi enkulu yeMekong kunyaka ophelileyo, Ngokwengxelo entsha evela kwiNgxowa-mali yeWorld Wildlife.
Kwizilwanyana ezanyisayo ezitsha ezifunyenweyo, iSkywalker Hoolock Gibbon yabonwa okokuqala phakathi ku-2017 yaza yathiywa ngegama lomlinganiswa we "Star Wars", kumdlali weqonga uMark Hamill. Sele kunjalo, sesona sengozini yama-25 isesichengeni sokufa emhlabeni kwaye sijamelene "nomngcipheko omkhulu nosondeleyo ekusindisweni kwayo (njengoko) zininzi ezinye iintlobo ezincinci zeenkawu kumazantsi eTshayina nakuMzantsi-mpuma weAsia ngenxa yokulahleka kwendawo yokuhlala nokuzingela," ngokuka iqela eliyifumeneyo.
Izilwanyana ezincancisayo ezintathu, iintlanzi ezingama-23, izilwanyana ezingama-14 eziphila emanzini, izilwanyana ezingama-26 ezirhubuluzayo kunye nezityalo ezingama-91 zafunyanwa eCambodia, eLaos, eMyanmar, eThailand naseVietnam, kwezinye zezona ndawo zingenakufikelelwa, ezinjengeentaba kunye neendawo ezinamahlathi ashinyeneyo. imilambo kunye nengca.
Nangona kunjalo, iingcali zilumkise ngelithi uninzi lweentlobo ezingafumanekiyo ziya kulahleka ngenxa yokugawulwa kwamahlathi, ukutshintsha kwemozulu, ukuzingela ngokungekho semthethweni nokuzingela ngokungekho mthethweni.
"Zininzi ezinye iintlobo ezikhoyo ezilindele ukufunyanwa kwaye ngelishwa, uninzi oluninzi oluya kulahleka ngaphambi kokuba yenzeke," utshilo uStuart Chapman, uMlawuli weSithili seAsia-Pacific kwi-WWF ye-Conservation Impact. “Akunyanzelekanga ukuba kubenjalo. Ukuqinisekisa ukuba oovimba abakhulu benzelwe izilwanyana zasendle, kunye nemizamo eyandisiweyo yokuvala iimarike zorhwebo ngokungekho semthethweni, kuya kunceda kakhulu ekulondolozeni izilwanyana zasendle ezingaqhelekanga kwingingqi yaseMekong. ”
Uninzi lwezilwanyana zasendle ezichazwe kwingxelo entsha- Iintlobo ezintsha kwiBhloko - sele usemngciphekweni wokuphulukana noluntu okanye nokupheliswa.
Olu luhlu lwe-fragility luvela ku-bamboo, olwahlukileyo olunezinto ezizodwa ezifana neebhalbhu kwisiseko salo, olufunyenwe kwiiCardamom Mountains ezinuka kamnandi zaseCambodia, ezisemngciphekweni wokucoca, kule mifuno intsha yaseLaos, esele isemngciphekweni ngenxa yokuba indawo yokuhlala iye yaqeshiselwa ukumbiwa kwelitye lekalika.
Ngelixa iLaos neMyanmar bezamile ukubambezela urhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni, ngokwandisa izohlwayo nangokuvala iivenkile kunye neemarike, abazingeli abangekho mthethweni banokubamba ngokulula kwaye bathuthe izilwanyana banqumle imida, ngakumbi kwiindawo ezinje ngeMongla neTachilek eMyanmar, utshilo uLee Poston, osisithethi seWWF kwingingqi yeGreater Mekong.
Ibhetri eneenwele ezifana ne-Lance Bass 'iconic frosted tips ze-band * NSYNC, yafunyanwa kwindawo yokuhlala engaphantsi kweHimalaya yehlathi laseMyanmar iHkakabo Razi.
UPoston uthe imigibe eyenziwe ngentambo yebhayisikile enexabiso eliphantsi ihlala isetyenziswa ngokungakhethiyo ngabazingeli abangekho mthethweni, kokubini ukubamba inyama yetyiwa ukuze ityiwe ekuhlaleni kunye nokubamba iintlobo zezilwanyana ezisemngciphekweni ezifana nehlosi nengwe kurhwebo lwezilwanyana zasendle. Ngelixa ewuncoma umsebenzi wabalindi bendawo abagcina umkhondo baphonononge iindawo ezinemigibe, ubuninzi bawo benza umsebenzi wokususa ubunzima.
Ngaphandle kwemiceli mngeni, uPoston uthe le ngxelo intsha "ibubungqina bokomelela kwendalo."
“Ngokuqaqambisa oku kufunyanwa kungakholelekiyo ngamakhulu ososayensi behlabathi, sithumela umyalezo wokuba nangona izoyikiso zinkulu kwizilwanyana zasendle kwiGreater Mekong, lisekhona ithemba ngekamva, kuba zininzi izinto ezintsha ezimangalisayo ezifumanekayo zonke ixesha, ”utshilo.
Kwingxelo, uChapman uthe “kukho igazi, ukubila kunye neenyembezi emva kwako konke ukufumanisa okutsha. Kodwa lukhuphiswano oluchasene nexesha ukubhengeza into entsha ukuze kuthathwe amanyathelo okukhusela ngaphambi kokuba kuphele ixesha. ”